'अभिभावकको आवश्यकता महसुस' : अबको निकास, निर्विकल्प निर्मल निवास ! | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक २८ गते ०७:५६
नेपाललाई दशा लागेको रहेछ ! ब्यक्ति,परिवार,समाज देश,सबैलाई एक युगमा एक पटक दुख आइलाग्छ!अमेरिका मा टुइनटावर हमला, अफ्गानिस्थान, इराकलाई पनि कुनै न कुनै कारण बनेर समस्या आइलागे विकसित र चेतनसिल देश आफुलाइ सम्हालेर लगिसके हामी सम्हालिन सकेनौं । किनकि गरिब भुपरिबेस्ठित देश त्यसमा पनि आत्मनिर्भर नभएको, कसैले चाहेर या नचाहेर पनि केहि ठुला हाइड्रोपावरबाट बिजुली निकालेर ग्यास र पेट्रोल डिजेलको सट्टा भर्ना गर्न नसकेसम्म हामी जहिल्यै जहाँको त्यहीँ हुन्छौं नै । बिगत २२ बर्ष देखी हामी बिपत्तिमा छौं । एक पछि अर्को ४५ मा नकाबन्दी, ४७ मा ब्यबस्था परिवर्तन । फेरि शिशु प्रजातन्त्रको नाटक भन्दै नेताको भरणपोषण, ५२ मा अर्को बिद्रोहको थालनी, ५८मा अभिभावक गुमाउनु परेको, ६२मा फेरि गणतन्त्रको हतारो, संविधान सभाको नाटकफ आदि इत्यादि ।
हामी नेपाली पनि विश्वसगै एक्काइसौं सताब्दिको स्वतन्त्रता खोज्दै हिड्यौं । सायद जनता जस्ले परिवर्तन खोज्यो त्यो गल्ती होईन तर जस्ले परिवर्तन दिन्छु भन्यो ,उसले आफुले लियो,जनता र देशलाई धोका दियो । जसले यो देशको संरचना र संरक्षण गर्दै आयो उसैलाई पहिला फालिदियो । एउटा घरको सम्पुर्ण अवस्था घरमुलीलाई थाहा हुन्छ । त्यसैअनुरूप देशको बाहिरी/भित्री कुरा राजतन्त्रलाई भलिभाती थाहा थियो । उसलाई नफालेको भए आज धर्ममा प्रहार हुन सक्दैन थियो । बाहिरी कुटनैतिकमा फेल हुने थिएन ।
हामीलाईथाहा छैन र, अमेरिका, बेलायत, अतिबिकसित मुलुकमा पनि एक जना कार्यकारी फेरबदल गर्दा ३-३ महिना लगाउछन । hand-over ,take-over अनिवार्य हुन्छ । किनकि त्यो अति आबस्यक हो । यहाँ त भत्काउने र आगो लगाउने, छिटो भन्दा छिटो हुने, बनाउने बेलामा कोहि छैन । त्यसैले कसैलाई निषेध नगरी अभिभावकलाई पुनस्थापना गर्न दबाब दिऔं । एक्काइसौं सताब्दिको अभिभावक भएर सक्षम ब्यक्ति लाई लिएर राजतन्त्रले देश हाक्नेछ ।
बिस्तारै तर दिगो बिकास हुनेछ । न कि बनेको तीन महिनामा पुल भत्किने छ । पिच गरेको भोलिपल्टै उप्किनेछ, न बिना इन्जिनियरिङ बाटो खनेर हरेक दिन बस गुल्टाइनेछ । बरु बिस्तारै उद्योग हरु खुल्दै जानेछन् । बिदेशमा पसिना बगाएका हरु स्वदेश आउने छन । आखिर हामी पार्टीमा लाग्ने नलाग्ने सबैले महसुस गरिसकेका छौं कि पुरानै अभिभावक नेपालको लागी अतिआबस्यक भैसकेको छ । नत्र देश, उपनिवेशको संघारमा गइसकेको छ ।
अबको निकास, निर्विकल्प निर्मल निवास !
मणिराज सत्यालको फेसवुकबाट